आज वर्षकै सबैभन्दा लामो दिन, आज कति घण्टा हुन्छ त ? - Mitho Khabar
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on आज वर्षकै सबैभन्दा लामो दिन, आज कति घण्टा हुन्छ त ?
काठमाडौं । आज यो वर्षको सबैभन्दा लामो दिन हो यसको अर्थ घण्टाको हिसाबले सबैभन्दा लामो घण्टाको दिन आज हुनेछ । तपाईं यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि रात सबैभन्दा छोटो हुनेछ ।
उत्तरी गोलार्द्धका देशमा यसलाई विन्टर सोल्स्टिस भनिन्छ तर दक्षिण गोलार्द्धका देशमा यो समर सोल्स्टिस हुनेछ । बिबिसीबा